Kuronga Kutenga Wiricheya: Ziva zvako Chokwadi
Chero ani akamboita a wiricheya kuongorora kwekushambadzira kuchaziva izvo mavhiripu inouya nemhando dzakasiyana uye maumbirwo uye inogona kuwanda mumutengo kubva pamadhora zviuru zvishanu kusvika pamadhora makumi matatu. Muchikamu chino tichatarisa nzira dzekuita kusarudza a wiricheya yakapusa.
Pane zvinhu zviviri zvekuchengeta mundangariro usati watenga a wiricheya, vari:
1. Yakawanda sei rubatsiro rwauchazoda?
2. Uchavepi iwe kushandisa iyo?
Chinyorwa kana Magetsi?
Rudzi rwe wiricheya izvo iwe zvaunoda zvinobva zvinoenderana nemamiriro ako. Semuenzaniso mumwe munhu ane tetra-plegia angangoda magetsi wiricheya nemufaro wekutenderera. Nekudaro kana iwe uine simba repamusoro remuviri simba kunyanya mumaoko ako, ungangoda kuenda ne wiricheya yemawoko.
Nei ungaite a wiricheya yemawoko pamusoro pemagetsi? Chinyorwa mavhiripu inodhura zvakanyanya uye akareruka uye iwo chete anorema chero kupi zvako kubva pamakumi mana kusvika makumi matatu mapaundi, nepo magetsi mavhiripu inorema seanosvika mazana maviri emapaunzi.
Masuwo uye Mahoroji anogona kuve Chinyorwa
Uri kuzove iwe kushandisa ari wiricheya mumba kana panze kana zvese zviri zviviri? Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezvazvo kana uchizove uchifamba nayo. Kuenda neyakaonda wiricheya inogara iri nani nekuti inogona kupfuura nemumasuo madiki uye mukoridho kumba uye munzvimbo yebasa.
Kuwanika kunogara kuchikosha. Iwe haudi kuti ubatwe mune yakashatirwa mamiriro uko nekuda kwehukuru zvaizove zvisingaite kutendeuka kuruboshwe kana kurudyi.
Zvinhu zvekuchengeta mundangariro
Kukura uye kuyerwa kweiyo wiricheya inofanira kupihwa pekutanga pekutanga. Ndiwo maviri maficha anoenderana nekugona kwechigaro uye nekudaro une rusununguko rwakawanda sei.
A isina kurema wheelchair iyo inorema pakati pemakumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu nemashanu mapaundi zviri nyore kwazvo kusimudza mumotokari yemotokari. Izvo zvakare zviri nyore uye zvakapusa kupeta nekutakura uchifamba. Iwe haugone kupeta mota mavhiripu.
Zviyero zvekuchengeta mundangariro
Chirevo chinotevera chakakosha kukura kweiyo wiricheya. Zvinhu zviviri zvikuru zvaunofanira kutarisa ndizvo chigaro upamhi uye yekumashure rutsigiro kukwirira. Hupamhi hwemashure kumashure pawakagara ndiyo chigaro upamhi.
Kudzika kwechigaro kunoyerwa kubva kumashure kwemagaro kusvika mukati memabvi. Chiyero kubva kumusoro kwepfudzi kusvika pasi kwako ndiko kusimudzira kwekuseri kukwirira.
Kana iwe ukawedzera mamwe masendimita masere kune iyo chigaro upamhi izvo zvinokupa iwe upamhi hwese hwechigaro. Kutakura mavhiripu kazhinji akanyanya kutetepa uye hupamhi hwayo hwese chete masendimita matatu paupamhi pane iyo chigaro upamhi.
Kumbira Chiremba Wako
Unogona kuita yako wiricheya yakachengeteka zvakanyanya nekuwedzera mabhandi echigaro, anti-matipi, uye mabhureki ekuwedzera. Kuti chigaro chevhiri chigare chakanyatsogadzikana, unogona kuwedzera makushingi nematsigiro kumashure.
Kureba kwerutsigiro rwemashure kunoenderana neyakawandisa yemusoro wekudzora, trunk kutonga uye yepamusoro muviri simba iro mushandisi anaro. Nyanzvi yako yepanyama ichave irwendo rukuru mukubatsira iwe gadzirisa ari wiricheya zvaunoda.